About — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Dhisay Si faana jirto inay la xiriiraan runta adag kitaabiga ah in dhallinyaro ah, dhagaystayaasha dhaqamada siyaabo mashquuliya iyo awood badan. Hogaaminayaan Trip Lee, qoraa, macallinka, iyo artist hip-hop, Dhisay Si faana oo doonaysa in ay qalabeeyaan iyo dhiiri dhaqdhaqaaq Masiixa-dayda kuwa unashamed in faana on Eebahood.
Trip Lee waa qoraa, macallinka, artist hip-hop, iyo hogaamiyaha fikirka. wadaad A ee Atlanta, uu si joogto ah dadka ku wacdiyo oo bara shirarka Christian iyo dhacdooyinka, oo wuu oofiyey music kumanaan dhagaystayaasha adduunka oo dhan.
In uu buugga ugu horeysay, Life The Good, Lee ayaa tilmaamay in nolosha badan la heli karaa oo keliya Masiix - nolol wax ka baxsan dunida ku siin karaan. Buug uu qoray labaad, Kaca, ku tilmaamay qarni ka yar ma aha in ay sugaan in ay Ilaah raacaan, laakiin in ay kor u hesho oo haatan ku nool.
Sida artist hip-hop a, music Lee ayaa helay aqoonsado loona saxiixo muhiim, halka u gaadho dad badan oo sii kordhaya. Waxa uu ku guuleystay abaalmarinta a Xiddigle oo loo magacaabay dhowr Dove Awards. Isaga oo saddex albums ee la soo dhaafay ayaa soo baxay at #1 on gooldhalinta boor Injiil, iyo album ugu dambeeyey, Kaca, soo baxay at #2 on gooldhalinta boor Rap iyo #16 on boor ah 200.
rabitaan qoto dheer in uu qoraal Trip ee, baridda, iyo fulinta waa in la sheegi roonaanta iyo ammaanta Ciise Masiix.
Si aad u ballansan Trip Lee si loo baro, wacdiya, ama u qabtaan ee aad dhacdo, xiriir WME.